" မိုးရာသီနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမရဲ့ငယ်ဘဝပျော်စရာအမှတ်တရလေးတွေကိုပြောပြလာခဲ့တဲ့ဘုန်းသီရိကျော်'' - Cele Gabar
CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေဘုန်းသီရိကျော်ကတော့လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းဇာတ်လမ်းတိုတွေအပြင် ကြော်ငြာလေးတွေလည်းရိုက်ကူးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စိုင်းစိုင်းရဲ့ Sai Cosmetix ပြိုင်ပွဲကနေစပြီးအနုပညာအလုပ်တွေစလုပ်ခဲ့တဲ့သူလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်မျက်နှာလေးက လမင်းလေးသဖွယ်ဝိုင်းဝိုင်းပြည်ပြည့်လေးနဲ့ ဇော်ပိုင်ရဲ့ မေသီချင်းလိုပဲ ဘုန်းသီရိကျော်ကတော့ အမျိုးသားပရိသတ်တွေတခဲနက်ဝန်းရံ အားပေးခြင်းခံရတဲ့မင်းသမီးလေးလို့ဆိုရမှာပါ။
ချစ်စရာကောင်းခြင်းတွေစုစည်းထားတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ အပြုံးတွေ ၊စကားပြောဟန်တွေက အမျိုးသားထုကြီးရဲ့ ရင်ကို ဆွဲခါလှုပ်ရမ်းနိုင်သူလေးလို့ ဆိုရမှာပါ။
လက်ရှိမှာတော့​မကြာခင်မှာကျရောက်တော့မယ့်မိုးရာသီနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမရဲ့ငယ်ဘဝအမှတ်တရလေးတွေကိုပြောပြလာခဲ့တာပါ။”မိုးရာသီနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အမှတ်တရတွေရှိကြလား? ☔️ Jenny ဆီမှာတော့ မိုးရာသီဆို လွမ်းမောစရာရော၊ ပျော်ရွှင်စရာရော အမှတ်တရတွေမျိုးစုံရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ပျော်ခဲ့ရတဲ့ အမှတ်တရတွေပဲ ပြောပြချင်တယ် 😊တက္ကသိုလ်တက်တုန်းကဆို ထီးတစ်ချောင်းတည်းပါလာပြီး သူငယ်ချင်းအုပ်လိုက်နဲ့ မိုးသည်းကြီးထဲ အတန်းတွေလစ်၊ ကန်တင်းသွားနဲ့ ပြန်တွေးကြည့်လိုက်ရင် ပျော်စရာတွေချည်းပါပဲ။ Jenny ပရိသတ်တွေထဲမှာရော မိုးရာသီနဲ့ပတ်သတ်ရင် ဘာအမှတ်တရတွေ ရှိကြလဲ? ပြောပြသွားဦး… အပျင်းပြေထိုင်ဖတ်ချင်လို့ 🥰 ”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ ပြောပြကာ ပြန်လည်ပြီးပရိသတ်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့တာပါ။CeleGabarပရိသတ်တွေထဲမှာရော မိုးရာသီအမှတ်တရတွေရှိရင်မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။
CeleGabar ပရိသတ္ႀကီးေရဘုန္းသီရိေက်ာ္ကေတာ့လက္ရွိမွာဆိုရင္လည္းဇာတ္လမ္းတိုေတြအျပင္ ေၾကာ္ျငာေလးေတြလည္း႐ိုက္ကူးလာတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။စိုင္းစိုင္းရဲ႕ Sai Cosmetix ၿပိဳင္ပြဲကေနစၿပီးအႏုပညာအလုပ္ေတြစလုပ္ခဲ့တဲ့သူေလးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္မ်က္ႏွာေလးက လမင္းေလးသဖြယ္ဝိုင္းဝိုင္းျပည္ျပည့္ေလးနဲ႔ ေဇာ္ပိုင္ရဲ႕ ေမသီခ်င္းလိုပဲ ဘုန္းသီရိေက်ာ္ကေတာ့ အမ်ိဳးသားပရိသတ္ေတြတခဲနက္ဝန္းရံ အားေပးျခင္းခံရတဲ့မင္းသမီးေလးလို႔ဆိုရမွာပါ။
ခ်စ္စရာေကာင္းျခင္းေတြစုစည္းထားတဲ့မ်က္ႏွာေလးနဲ႔ အၿပဳံးေတြ ၊စကားေျပာဟန္ေတြက အမ်ိဳးသားထုႀကီးရဲ႕ ရင္ကို ဆြဲခါလႈပ္ရမ္းႏိုင္သူေလးလို႔ ဆိုရမွာပါ။
လက္ရွိမွာေတာ့​မၾကာခင္မွာက်ေရာက္ေတာ့မယ့္မိုးရာသီနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးသူမရဲ႕ငယ္ဘဝအမွတ္တရေလးေတြကိုေျပာျပလာခဲ့တာပါ။”မိုးရာသီနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး အမွတ္တရေတြရွိၾကလား? ☔️ Jenny ဆီမွာေတာ့ မိုးရာသီဆို လြမ္းေမာစရာေရာ၊ ေပ်ာ္႐ႊင္စရာေရာ အမွတ္တရေတြမ်ိဳးစုံရွိခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေပ်ာ္ခဲ့ရတဲ့ အမွတ္တရေတြပဲ ေျပာျပခ်င္တယ္ 😊တကၠသိုလ္တက္တုန္းကဆို ထီးတစ္ေခ်ာင္းတည္းပါလာၿပီး သူငယ္ခ်င္းအုပ္လိုက္နဲ႔ မိုးသည္းႀကီးထဲ အတန္းေတြလစ္၊ ကန္တင္းသြားနဲ႔ ျပန္ေတြးၾကည့္လိုက္ရင္ ေပ်ာ္စရာေတြခ်ည္းပါပဲ။ Jenny ပရိသတ္ေတြထဲမွာေရာ မိုးရာသီနဲ႔ပတ္သတ္ရင္ ဘာအမွတ္တရေတြ ရွိၾကလဲ? ေျပာျပသြားဦး… အပ်င္းေျပထိုင္ဖတ္ခ်င္လို႔ 🥰 ”ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔ ေျပာျပကာ ျပန္လည္ၿပီးပရိသတ္ေတြကိုေမးခြန္းထုတ္ခဲ့တာပါ။CeleGabarပရိသတ္ေတြထဲမွာေရာ မိုးရာသီအမွတ္တရေတြရွိရင္မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပါဦးေနာ္။
Previous post ” ပေါ့ပါးလွတ်လပ်တဲ့ဂျင်းဝမ်းဆက်ဖက်ရှင်လေးကိုစတိုင်ကျကျဝတ်ဆင်ကာ မိသားစုနဲ့ပျော်ရွှင်စွာခရီးသွားနေတဲ့ပုံရိပ်တွေကို တင်လာခဲ့တဲ့စိုးပြည့်သဇင်”
Next post ” မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေစုစည်းတည်ရှိတဲ့ ပုဂံမြေကို သွားရောက်လည်ပတ်နေတဲ့ခေးဆက်သွင်”